के महिलाको यौ-न ह’र्मोनले पुरुषलाई कोरोनाबाट जोगाउला? – Everest Pati
कतिपय वैज्ञानिकले यसलाई यौ-न ह-र्मो-न-सँग जोडेर हेरेका छन्। उनीहरू भन्छन्– पुरुषको यौ-न ह-र्मोनमा ‘टे-स्टो-स्टेरन’ को मात्रा बढी हुन्छ, जसले रोग प्रतिरोधक प्रणाली खुम्च्याउने काम गर्छ। जबकि, महिलाको यौ-न ह-र्मोनमा हुने ‘ए-स्ट्रोजेन’ ले रोग प्रतिरोधक प्रणाली अझ सक्रिय बनाउँछ।
त्यसो भए के महिलाको यौ-न ह-र्मोन छोटो समयका लागि पुरुषको शरीरमा हाल्यो भने कोरोनासँग लड्न मद्दत पुग्ला? न्यूयोर्कको लङ आइल्यान्डका डाक्टरहरूले गत साताबाट यसमा क्लिनिकल परीक्षण सुरू गरेका छन्। उनीहरूले कोभिड–१९ संक्रमणबाट गम्भीर बिरामी केही पुरुषलाई रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउन महिलाको यौ-न ह-र्मोन दिएका छन्।
यो क्लिनिकल परीक्षणको नतिजा केही महिनाभित्र आउनेछ। एस्ट्रोजेन हर्मोनले महिलाहरूको शरीरलाई ब्या-क्टेरिया, भाइरस लगायत बाह्य तत्वसँग जुध्न मद्दत गर्ने वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ। यसले त्यही काम पुरुषको शरीरमा गर्छ कि गर्दैन भन्ने मात्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिसिनका सहायक डिन डा. श्यारोन नाचमेन यसलाई ‘नवीन प्रयोग’ मान्छन्। ‘यो अहिलेसम्म कहिल्यै प्रयोग नभएको नवीन अभ्यास हो। यसले काम गर्छ कि गर्दैन हामीलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘हरेक नयाँ अभ्यास नयाँ आइडियाबाटै सुरू हुने हो।’
यस्तै परीक्षण अर्को साताबाट लस एञ्जल्सको सेडार्स–सिनाई अस्पतालका डाक्टरहरूले पनि सुरू गर्दैछन्। यहाँ महिलाको शरीरमा पाइने अर्को हर्मोन ‘प्रोजेस्टेरोन’ दिएर पुरुष बिरामीको उपचार गरिँदैछ। यहाँ ४० जना पुरुष बिरामीलाई परीक्षणमा राखिएको छ। तीमध्ये आधालाई पाँच दिनसम्म दैनिक दुईचोटि प्रोजेस्टेरोन ह-र्मोन दिइनेछ।
‘कोरोना बिरामीको तथ्यांक हेर्ने हो भने महिला र पुरुषबीच ठूलो भिन्नता देखिन्छ। यो महामारीसँग लड्न पुरुषहरू असफल देखिँदै आएका छन्,’ सेडार्स–सिनाई अस्पतालका डाक्टर सारा घान्देहरीले भनिन्, ‘हामीकहाँ भेन्टिलेटरमा राख्नुपरेका ७५ प्रतिशत बिरामी पुरुष छन्।’
उनका अनुसार, ग-र्भ-वती महिलामा एस्ट्रोजेनको मात्रा अत्यधिक हुन्छ। उनीहरू कोरोना संक्रमणबाट ग-म्भीर बिरामी परेका उदाहरण कमै छन्।
‘महिलाको ह-र्मोनमा त्यस्तो केही गुण छ, जसले उनीहरूलाई कोरोनाबाट सुरक्षा दिइरहेको छ। ग-र्भ-वतीलाई त यसले झन् बढी सुरक्षा दिइरहेको छ। यही कारणले हामी कोरोना संक्रमित पुरुषको शरीरमा महिला हर्मोन हालेर परीक्षण गर्दैछौं,’ उनले भनिन्।
परीक्षण क्रममा महिलाको यौ-न ह-र्मोन दिइएका पुरुष बिरामीको दैनिक शारीरिक परीक्षण हुनेछ। उनीहरूको अवस्था सुधार हुन्छ कि हुँदैन, अक्सिजन दिनुपर्छ कि पर्दैन र उनीहरूलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन अध्ययन गरिनेछ। कोरोना महामारीको सुरूआतदेखि नै महिलाभन्दा पुरुष बढी प्रभावित भएको तथ्यांक आउन थालेको हो।
आजदेखि लकडाउनलाई थप कडा पारिने
लकडाउनमा घर बसेकाको सार्वजनिक विदा कायम, तलब भत्ता पाउने